Velashape Body Contouring Factory |China Velashape Body Contouring Abavelisi kunye nababoneleli
Umzimba osebenzayo ogudileyo kumashape slimming rf umzimba obumba ukuncipha kobunzima bomatshini wokususa imibimbi
1. Ukuqinisa ulusu kunye nokususa imibimbi ukuphakamisa ubuso
2. Ukumila komzimba, ukuthotywa komzimba ukuthoba ubunzima
3. Ukususwa kwe-cellulite, ukunyuswa kwethanga lengalo. ukunyibilika kwamafutha, Amanqaku okuzolula, amaxolo e-orenji njl.
Olu nyango olungaphangeliyo, olungaphazamisiyo lwe-cellulite lunamacandelo amane, athe xa edibene abonakaliswe ukuba ayasebenza ekuqiniseni nasekutyibilikeni kwesikhumba: amandla e-radiofrequency (RF), amandla e-infraredlight, kunye ne-vacuum yomatshini, i-automatic rolling massage.
Yenza iiseli ezinamafutha zibekwimo esebenza ngokukhawuleza, ukuze iiseli zivelise ubushushu bokungqubana, emva koko intsalela yamafutha kunye ne-vivotoxin yomzimba ngaphakathi inokukhutshwa.
I-Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Umatshini wokuQhuba uMzimba
Kuma Shape Pro 5-In-1 Umatshini wokuQhuba uMzimba
I-Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Isixhobo sidibanisa i-multi-technologies ye-Multipolar kunye ne-Bipolar RF kunye ne-Vacuum, i-40K Cavitation kunye ne-Lipolaser.
I-Multipolar kunye ne-Bipolar RF eneVacuum
I-Multipolar RF eqhubela phambili ihambisa amandla obushushu nzulu kumaleko ederma, kwaye invloves kusetyenziswa amaza ombane wombane ukubuyisela iinkqubo zephysiological.Inika iziphumo zonyango olusebenzayo kwi-cellulite, ukuqiniswa komzimba kunye nokuvuselelwa kwe-collagen.
Ngentloko yesandi esomeleleyo, isandi esinamandla se-40KHZ sinokukhutshwa ukuze singcangcazele iiseli ezinamafutha ngesantya esiphezulu kwaye zivelise iipokotho zomoya ezininzi zokucoca ngaphakathi nangaphandle kweeseli ezinamafutha, ziphembelele ngamandla iiseli ezinamafutha ukwenza uqhushumbo olwenzekayo kunye nokuchitha i-triglyceride kwi-glycerol kwaye isimahla. iiasidi ezinamafutha.
Eyaziwa ngokuba yi-laser ethambileyo, i-laser ebandayo okanye i-laser yonyango ephantsi, i-lipolaser isebenzisa ukukhanya okubomvu kwe-650nm amandla e-laser ukungena esikhumbeni, xa iiseli ezinamafutha zifaniswa, i-membrane yeseli iya kudala i-pores ukukhulula i-fatty acids kunye ne-glycerol.Iiseli ezinamafutha ziya kutshiswa okanye zikhutshwe yi-lymph circulation ngonyango lwe-infrared.
IR+RF+Vacuum+Massage Roller 4 kwi-1 Kumashape Body Slimming Machine
I-Kuma shape X ene-4 yokuphatha unyango yiteknoloji yakutshanje yokuphucula ukubonakala kwe-cellulite ngelixa i-smooling kunye
ukulungisa umzimba kwakhona.Isebenzisa i-Infrared kunye neRadio Frequency ukujolisa ngokuchanekileyo kunye nokutshisa izicubu ezinamafutha kwiindawo ezithile zomzimba.
ngelixa ukufunxa kunye ne-massage rollers igudile kwaye i-contour ulusu.Ikhuselekile, iyasebenza kwaye ingqinelwe ukuba isebenza kakuhle kwezonyango.